အဆိုပါ semantic desktop မှကြိုဆိုပါတယ်: အပိုဆုလမ်းကြောင်း: Distributions! | Linux မှ
semantic desktop မှကြိုဆိုပါတယ်။ Bonus track: Distributions!
KDE ဆောင်းပါးတွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ (အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, အပိုင်း 3, အပိုင်း 4, အပိုင်း 5, အပိုင်း6y အပိုင်း 7သီးခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရန်ထိုက်တန်သူအချို့မှတ်ချက်များတွင်အရာရာများစွာကိုကျွန်ုပ်ထည့်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောမတူညီသောဖြန့်ဝေမှုများအတွက်အကြံပေးချက်များဖြစ်သည်။
သတိရရအောင် - ကိစ္စတော်တော်များများမှာ KDE အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုဟာသင်၌ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့နှင့်အတူပြင်းထန်သောပြproblemsနာများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာကိုရွေးရမည်၊ မည်သည့်အရာကိုရှောင်ရမည်ကိုသိရှိရန်အပြင်၊ တစ်ခုက KDE နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
၎င်းသည် Ernesto Manríquez၏အလှူငွေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။Linux အကြောင်းသင်သိသမျှကိုမျှဝေပါ«။ Ernesto ဂုဏ်ယူပါတယ်
1 Debian? မဟုတ်ဘူး
2 Mageia? နှင်းဆီပန်း
3 Slackware ကိုတီထွင်
4 Rolling release? ပြဿနာမရှိပါဘူး။
5 Fedora၊ RHEL၊ CentOS
Debian Sid သည်မတည်ငြိမ်သော Debian repository တွင် KDE 4.8.4 ကိုနောက်ဆုံး version အဖြစ်ရရှိသည်။ ဒါက Debian ဘယ်လောက်ခေတ်မမီတော့ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးတယ်။ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှုရှိပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း bug များအားလုံးနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးသားဗားရှင်းအဟောင်းရှိရန်တောင်းခံရန်မျှော်လင့်သော်လည်း၊ မတည်မငြိမ်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာ၌မူဤဗားရှင်းအဟောင်းသည်လူသားတို့၏နားလည်မှုကိုပျက်ပြားစေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်အတိုင်း၊ Red Hat Enterprise Linux တွင် KDE 4.10.2 ကို install လုပ်ရန် semi-official နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် Debian Stable ကိုယ်တိုင်ထက်တည်ငြိမ်ပြီး ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Debian ကို KDE နှင့်အမှန်တကယ်သွင်းလိုပါကရွေးချယ်နိုင်သောနည်းလမ်းနှစ်ခုမှာ -
၁။ ZevenOS repositories ကို Debian Testing သို့ယူလာပါ။ ဒီရွေးချယ်မှုသည်မည်မျှကြာသည်သို့မဟုတ်မည်မျှလိုက်ဖက်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ သူတို့ကဒီစာကြောင်းနှစ်ခုကို /etc/sources.list ထဲထည့်သင့်တယ်။
deb အဓိက http://proindi.de/zevenos/neptune/repo/ sid
deb http://proindi.de/zevenos/neptune/kde-repo/ sid အဓိက
ထို့နောက် Aptitude ကို repositories နှင့် update လုပ်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်။
aptitude update ကို
aptitude kde-workspace ကို install
၂။ Debian Experimental repositories ကိုပြောင်းပါ။ ဤနေရာတွင်စိတ်ပျက်စရာအသစ် - အမှန်တကယ်စမ်းသပ်သည့်နေရာ၌ KDE အပတ်စဉ် git ရိုက်ချက် (OpenSuSE စက်ရုံနှင့်လုပ်သည်) သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး KDE2beta ကိုတွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သူမျှ KDE 4.11 နှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါ။ .4.10.4, တကယ့်တည်ငြိမ်တဲ့ဗားရှင်း။ ပြianနာမှာ Debian Experimental package များသည်အခြား packets များ၏အမှန်တကယ်မတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် /etc/sources.Slackwarelist တွင် deb လိုင်းများ၏ ဦး စားပေးကိုသေသေချာချာကိုင်တွယ်ပြီးသင် upgrade လုပ်တိုင်း KDE ကိုလက်ဖြင့်ထည့်သည်။ ကျွန်တော်ဒါကိုမအကြံပြုပါဘူး
Mageia ၏ပြproblemနာသည်ဖြန့်ချိမှုများစွာနှင့်အတူတူဖြစ်ပြီး Mandriva နှင့်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ KDE ဗားရှင်းကိုထုတ်လိုက်သည်နှင့်သူတို့နှင့်အတူအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ Mageia3သည် KDE 4.10.2 နှင့်ထွက်လာလျှင်၎င်းတို့အတွက် KDE 4.10.3 သို့သို့မဟုတ် KDE 4.10.4 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
Mandriva နဲ့ငါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ update တစ်ခုရဖို့ "Mandriva International Backports" ကိုသွားခဲ့ရပြီး MIB ရဲ့အဖွဲ့က Mageia ကိုမထောက်ပံ့ဘဲ ROSA Linux သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ Mandriva မိသားစုနှင့်ပတ်သက်လာရင် ROSA Linux ဟာ Mageia ထက်ရွေးချယ်ရမယ်။ Desktop R1 version အသစ်ကိုငါအရမ်းထောက်ခံတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် KDE ၌လူသစ်ဖြစ်လျှင်သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်။
Mandriva အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Backports အုပ်စုအုပ်စုများ၏အရည်အသွေးသည်ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ၄ င်းတို့၏ ROSA Linux နှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီ repository ကိုထည့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ http://urpmi.mandriva.ru/ သို့ သွား၍ MIB ဆိုသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ။ EasyURPMI သည်ကျန်အရာများကိုဂရုစိုက်ပါမည်။
Patrick Volkerding ၏ဖြန့်ဖြူးမှုသည်တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် package များမရှိခြင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသော်လည်း KDE အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။
၁။ Slackware-current သည် Arch ကဲ့သို့စစ်မှန်သောရွေ့လျားနေသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သင်မတည်ငြိမ်မှုကိုနှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။
၂။ Eric Hammeleers သည် Slackbuild2နှင့် KDE 4.10.4 အပြည့်ရှိသော Slackbuild scripts များနှင့်အတူသီးခြားသိုလှောင်ထားသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Slackware 14 ၏တည်ငြိမ်မှုကို KDE ၏စွမ်းအားနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျပထမနှစ်ခု packages များ install လုပ်ဖို့ရှိသည်:
polkit-kde- အေးဂျင့် -1
ထို့နောက်၎င်းရင်းမြစ်များကို SlackBuild script ဖြင့် download လုပ်ပြီးပြုစုသည်။
rsync -av rsync: //alien.slackbook.org/alien/ktown/source/4.10.4
ခဏစောင့်ပြီး KDE 4.10.4 ကို install လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Slackware 14 တွင်သာသုံးနိုင်သည်။
Rolling release? ပြဿနာမရှိပါဘူး။
Arch Linux ကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်ရွေ့လျားနေသောမူကွဲများနှင့် Arch (Manjaro, Chakra) မှဆင်းသက်လာသောမူများသည်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်မလိုအပ်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် KDE ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော command ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ဝီကီကိုဂရုပြုပါ - ပြန်လည်စုစည်းခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြareနာများရှိနိုင်သော်လည်းညွှန်ကြားချက်များအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ကိုသတိရပါ: Arch ကိုအသုံးပြုရန်စာမျက်နှာကိုသင်အမြဲဖတ်ရှုရန်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်အမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ လအနည်းငယ်ကြာမျှမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲထားခဲ့လျှင် Arch သည်အလွယ်တကူချိုးနိုင်ပြီးရုတ်တရက် update လုပ်နိုင်သည်။
Gentoo နှင့်လည်းထိုနည်းတူပင်၊ အစစ်အမှန် packet debunking orgy လိုအပ်သည်။
Fedora၊ RHEL၊ CentOS
KDE နှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရှင်းသော Fedora ကိုသုံးခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ http://kde-redhat.sourceforge.com သို့ သွား၍ Yum repository ကိုဖွင့်ရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။ Red Dieter, Fedora KDE အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်, KDE ကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေမယ့်သင်အများကြီးမတွေ့ရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄ င်း၏ package များသည်အဓိကသိုလှောင်ရာနေရာဆီရောက်ဖို့မကြာခဏအချိန်လိုတယ်။
တကယ်ထူးခြားတဲ့အချက်ကဒီကနေသင်ဟာ RHEL အတွက် KDE 4.10.2 packages များကို၎င်း၏အရောင်အသွေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်တမ်းအရင့်လူသိများတဲ့ဖြန့်ချိဖို့မှာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ဒီမှာ Debian Stable ကိုတကယ်ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသော distro အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒါကြောင့် KDE ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် RHEL ဆိုတာဒါမှမဟုတ် Scientific Linux လိုမျိုးမျိုးပွားမှုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံး EPEL (Enterprise Linux အတွက်တိုးချဲ့ထားသော Packages များ၊ RHEL အတွက်ပြုစုထားသော Fedora packages များပါ ၀ င်သည့် semi-official repository) ကိုဖွင့်ပြီးထို command များကို run ပါ။
ထိုဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပြီး "enabled = 0" ဆိုသည့်စာကြောင်းကို "enabled = 1" သို့ပြောင်းပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, KDE 4.10.2 ကို "မတည်မငြိမ်" အဖြစ်မှတ်သားထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့က Debian Wheezy ထက်ပိုအသုံး ၀ င်သော package များနှင့်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် KDE 4.10.2 ကိုဖြည့်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိထားရပါမည်။ ထိုနောက်မှဂန္ထဝင် Fedora / RHEL combo ။
KDE 4.3 (အလွန်ဟောင်းသည်) သည်အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သော KDE 4.10 ဖြင့်မည်သို့အစားထိုးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။ Scientific Linux မှထိုသီးသန့်နျူကလီးယားရူပဗေဒဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ရန်သည်အခွင့်သာပါသည်။
ဤအချိန်တွင် "enabled = 0" ကို "enable = 1" သို့လိုင်းအားလုံးကိုပြောင်းခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်သေချာစွာကြည့်ကြပါစို့။ [kde-inststable] ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့ဗားရှင်း KDE 4.11 beta 1 ကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ တရား ၀ င် Fedora repositories မတိုင်မှီက [kde-testing] သည်နောက်ဆုံးပေါ် KDE ၏တည်ငြိမ်သော version ကိုပေးလိမ့်မည်။ နှင့် [kde] အချိန်အများစုကိုကအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ kde.repo ဖိုင်ကိုအတိုင်းထားခဲ့ကြစို့၊ သို့မဟုတ်မတည်ငြိမ်မှုကိုတကယ်လိုလားလျှင် [kde-inststable] ကိုဖွင့်ကြစို့။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းပျောက်နေသည်, ဒါကြောင့်ဒီလမ်းညွှန်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ နောက်မှတွေ့မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » semantic desktop မှကြိုဆိုပါတယ်။ Bonus track: Distributions!
ငါအစကတည်းကလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပြီးပြီ။ အခုတော့ Chakra ပါတဲ့ semantic desktop အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်နေပြီ။
ဘာကြောင့် KDE နဲ့ Fedora ကိုတိုက်ရိုက် run တာလဲမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလဲ။
ဝီလျံ Moreno အားပြန်ပြောပါ
ငါ KDE ကိုအမြဲတမ်းသုံးခဲ့တယ်။ ဒီ semantic desktop ကနေတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး။ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ဘူး
ငါ KDE ကိုသုံးတယ်။ semantic desktop xD ကိုငါနားမလည်သေးဘူး
၎င်းကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်သော်လည်းအကြောင်းပြချက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများပါသော package များသည် Fedora repositories သို့ရောက်ရန်အချိန်များစွာကြာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်မတူဘဲ KDE သည် "အသစ်အသစ်သောပိုကောင်းသည်" ဟူသောအမြင့်ဆုံးစံနှုန်းကိုလိုက်နာသည်။ ထို့ကြောင့် Fedora ကို "stock repositories" တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း kde-redhat ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝရရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Plus Rex Dieter သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများကိုထိုသိုလှောင်ရုံတွင်ရုတ်တရက်ထည့်သည်။ သင်အသုံးမပြုလျှင်သင်လွတ်သွားလိမ့်မည်။
ငါကျိန်းသေ do ပြုလိမ့်မည်
ဒါ ၆၅ ဟုသူကပြောသည်
Debian Sid နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမင်းမှားနေတာကိုမင်းထင်တယ်။
၁- ပထမ၊ KDE 1 (သို့) KDE 4.10 အနှေးနှင့်အမြန်ဆိုလျှင် Debian Sid နှင့် Debian Testing သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Debian Sid သည် KDE 4.11 နှင့်အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်၊
2- ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်စာစောင်အချို့ (လွန်ခဲ့သောအချိန်ကတည်းက link ကိုမဖော်ပြနိုင်တော့ပါ) တွင်ဖတ်ပြီးပါပြီ၊ KDE ကိုမွမ်းမံရန်နှောင့်နှေးရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ KMail 1 (KDE 4.9 မတိုင်မီအထိ) မှ KMail သို့ကူးပြောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်2(KDE 4.10 တွင်အသုံးပြုသည်) - ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသူ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အီးမေးလ်များပျောက်ဆုံးခြင်းကိုသေချာစေလိုသည်။
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်သည် KDE 4.10.2 ကိုစမ်းသပ်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာကိုတပ်ဆင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ Nepomuk Cleaner ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြtheနာရှိခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါကပထမဆုံး Pass မှာပြproblemsနာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒုတိယမှာတော့အီးမေးလ်တွေကိုကြည့်လို့မရအောင်ထားခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတာက၊ ငါ backup တစ်ခုလုပ်ပြီး KDE 4.10.4 ကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ဆိုင်းဖို့ Debian Testing ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်သိုလှောင်မှုသို့ရောက်သည်။
Fabian Eduardo ဟုသူကပြောသည်
Fedora မှာ kde repo ထည့်သွင်းမှုမှာအောက်ပါပြproblemနာရှိနေပါတယ် -
apt.kde-redhat.org (apt.kde-redhat.org) ဖြေရှင်းခြင်း ... 129.93.181.6
apt.kde-redhat.org (apt.kde-redhat.org) သို့ဆက်သွယ်ခြင်း [129.93.181.6]: 80 ... မအောင်မြင်ပါ: ဆက်သွယ်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်
Fabián Eduardo အားစာပြန်ပါ
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာက Debian KDE ၏အဓိကထိန်းသိမ်းသူ Fathi Boudra နှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက် Strigi မည်သို့ထုပ်ပိုးရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ငါ Debian တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကောင်းစွာသဘောမကျခဲ့ပါ။ ငါသိသည်အတိုင်း, Debian သည်စမ်းသပ်မှု (အမည်မပါ)၊ မတည်မငြိမ် (Sid)၊ Debian Testing (Jessie) နှင့် Debian Stable (Wheezy) - ၄ င်းတွင်အခြေခံကျသောသိုလှောင်ရုံ ၄ ခုကိုအသုံးပြုသည်။
KDE 4.10.1 နှင့် KDE 4.10.3 အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကြီးမားသောမမြင်ရသော Akonadi IMAP ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူပြင်ဆင်ခြင်းသည်အီးမေးလ်ကိုင်တွယ်သကဲ့သို့မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည် (ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအမှားသည်ကြီးလေးသောကြောင့်၎င်းသည် point ဗားရှင်းများတွင်အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုများကိုခံထိုက်သည်) , KDE 4.10 သည် Sidian တွင်အမြဲရှိသင့်သည်။ သို့မှသာပြင်ဆင်မှုများသည် Debian စတိုင်ဖြင့် KDE 4.8 ဖြင့်အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပြီး Jessie သို့သွားနိုင်သည်။ Debian တွင်မတည်မငြိမ်သည် "မတည်မငြိမ်" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Debian Stable ကဲ့သို့မတည်ငြိမ်သော်လည်း၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးပြီး၎င်းသည်ဤနေရာတွင်မပြည့်စုံပါ။
အဓိကအချက်မှာ Debian တွင် KDE ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်တကျထုပ်ပိုးခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေဖြစ်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Debian ကိုသတိမပေးချင်ဘူး။
အမှား: မဟုတ်ပါ http://kde-redhat.sourceforge.com; ဟုတ်တယ်
မှန်ကိုသုံးပါ http://kdeforge2.unl.edu/kde-redhat/ (kde.repo ဖိုင်ရှိ apt.kde-redhat.org ကိုထိုလိပ်စာနှင့်အစားထိုးပါ)
ငါနားလည်သည်အထိ၎င်းကို oldstable (squeeze), တည်ငြိမ်သော (wheezy)၊ testing (jessie) နှင့်မတည်ငြိမ်သော (sid) ကိုသုံးသည်။ ငါသည် software အဟောင်းကိုအသုံးပြုရန်သင်လုံးဝသဘောတူသည်။ စကားမစပ်, မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းငါသည်ငါ့ wheezy ပေါ်မှာဤ kde install လုပ်ပါ, ကံဆန္ဒရှိ! xD
အဆုံးမှာတော့စမ်းသပ်ခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် gmd3 ကိုမတင်ပါဘူး။ ဒါကို xD fix တဲ့အခါမှာ kde ကိုရွှေ့ဆိုင်းရတော့မယ်။
Whisker Menu: Xfce အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ